Izindaba - ziqalise izikhuthazi zokuphakamisa ukuthengiswa kwezimoto ukuze kuqedwe umthelela we-COVID-19 emakethe yezimoto yasendaweni.
IShanghai (i-Gasgoo) - I-Yiwu, eyaziwa njengemakethe yezimpahla ezinkulu kunazo zonke emhlabeni, yethule izikhuthazi zokuphakamisa ukuthengiswa kwezimoto ukuze kuqedwe umthelela we-COVID-19 emakethe yezimoto yendawo.
Uma imoto ibiza kakhulu, umthengi uzothola imali ethe xaxa. Abathengi abathenga izimoto ezinamanani angaphansi kuka-RMB10,000 (kufaka ne-VAT) bazonikezwa ngoxhaso luka-RMB3,000 ngemoto ngayinye. Umxhaso olingana no-RMB5,000 usebenza emotweni enenani elingu-RMB100,000 noma phakathi kuka-RMB100,000 no-300,000. Ngaphezu kwalokho, isikhuthazo seyunithi sizophindwa kabili sibe ngama-RMB10,000 emikhiqizweni amanani ayo ahlala kuma-RMB300,000 noma phakathi kuka-RMB300,000 kuya ku-500,000, naku-RMB20,000 kulabo ababiziwe noma ngaphezulu kuka-RMB500,000.
Uhulumeni uzokhipha uhlu lwabamhlophe lwezinkampani zendawo ezithengisa izimoto. Isikhathi sokuba semthethweni kwenqubomgomo sizohlala kusukela ekukhishweni kohlu lwabamhlophe kuze kube nguJuni 30, 2020.
Abathengi ngabodwa noma izinkampani ezithenga izimoto ezintsha kubathengisi ohlwini lwabamhlophe abalubalulwe ngenhla bese zikhokha intela yokuthengwa kwezimoto e-Yiwu zingathola izixhaso emva kokuba izicelo zazo zivunyelwe iziphathimandla ezifanele.
Ngaphandle kwedatha yokuphelelwa yisikhathi, uhulumeni ubuye abeke umkhawulo ngenani lezimoto ezisebenza kulokho kuheha. Kuzokwethulwa i-quota yamayunithi ayi-10,000 ekuqaleni ngaleyo ndlela yokukhuthaza abathengi ukuthi bathenge izimoto ngokushesha okukhulu.
Ukuthengiswa kwezimoto eChina kwahlanganisa u-4.4% unyaka nonyaka kuya kumayunithi ayizigidi ezingama-2.07 ngo-Ephreli, kepha ukuthengiswa kwe-PV kusancipha ngo-2.6%, ngokusho kweChina Association of Automobile Manufacturers (CAAM). Kungakhombisa ukuthi izidingo zokusetshenziswa kwezimoto ezizimele kumele zithuthukiswe futhi zikhuliswe.
Ukuvuselela ukuthengiswa kwezimoto okuhlaselwe kakhulu ukusabalala kwe-coronavirus, amadolobha amaningi e-China akhiphe izindlela ezahlukahlukene, phakathi kwazo okuhlinzeka imixhaso yiyona eyamukelwa kakhulu. I-Yiwu akuyona eyokuqala, futhi ngokuqinisekile ngeke ibe ngeyokugcina.